Iran: Lahatsarin’ny hetsika androany · Global Voices teny Malagasy
Iran: Lahatsarin'ny hetsika androany
Voadika ny 17 Febroary 2011 5:19 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Português, Español, Italiano, srpski, македонски, 繁體中文, 简体中文, Ελληνικά, English
Na dia eo aza ny fandraran'ny Governemanta, nanao fihetsiketsehana tany aminà tanàna maro ireo Iraniana androany, anisan'izany ny tany Tehran (sary eto ambony), Shiraz, Isfahan, ary Rasht. Nangataka ny fahalalahana hanao fihetsiketsehana miaraka amin'ny vahoaka Ejiptiana sy Toniziana ny mpanohitra Iraniana kanefa dia notsipahan'ny Fitondrana islamika izany fangatahana izany.
Araka ireo tatitry ny media, nivezivezy tany anaty aterineto ny vaovao mikasika ny fifandonan'ny mpanohitra sy ny mpitandro filaminana tany Tehran, renivohitr'i Iran. Araka ireo tatitra ireo, anarivony ireo mpanao fihetsiketsehana nanao rodobe tany amin'ny tanànan'i Enghelab sy Azadi (izay mifandray, mamorona lalan-kely mahitsy avy any afovoan-tanàna), niaraka taminà hetsika lehibe tany amin'ny Kianjan'ny Enghelab sy ny Lalamben'i Vali-Asr.
Nanomboka nivoaka any anaty aterineto ireo lahatsary mikasika ny zava-nitranga androany.
Tsy misy fetrany ny lanitra
Nampakatra ny sarin'ireo maritioran'ny Hetsika Maitso tamina milina fampakaran'entana (grue) tany Tehran ny mpanohitra iray. Nampidina azy haingana ireo mpitandro filaminana, kanefa dia hozarazaraina amin'ny alalan'ny mediam-bahoaka mandritra ny fotoana ela ity herim-pony ity.
Ary ireo fifandonana tany Tehran
Ao anatin'ity lahatsary ity, hita mandoro sarin'i Ayatollah Khomeini ireo mpanohitra tany Tehran.
Matesa ny didy jadon'i Isfahan
Voatatitra ny fihetsiketsehana sy ny fifandonana nisy teo amin'ireo mpanohitra sy ny mpitandro filaminana tany Isfahan.
Fisian'ny miaramila marobe tany Mashhad